Arahabaina Nahatratra Ny Folo Taona Ry Global Voices! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Desambra 2014 1:48 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Español, عربي, Magyar, English
Tamin'ny 26 Oktobra, tsingerintaonan'ny hafatra am-bilaogy voalohany indrindra tato aminay, nanao jery todika ny tantaran’ny fotoana nahatonga ny fisian'ny Global Voices izahay. Tamin'ity andro ity, folo taona lasa izay no nisian'izany fotoana izany, ka mahatonga ny 11 Desambra ho tsingerintaonanay amin'ny fomba ofisialy.
Araka ny fahafantaran'izay rehetra efa tafahoana amin'ireo “tween” [antokonan'ny fahatanorana], dia taonan'ny kihon-dalana iankinan'ny hoavy manontolo izany fahafolo taona izany. Ary raha hitan'izany folo taona izany fa antonona azy ny mipetraka anilan'ny tantara mety hivadika ho nofy ratsy na izay rehetra mandany ny ron-dohan'ny zaza hiditra amin'ny fahatanorana amin'izao andro ankehitriny izao, sy maka fotoana vetivety aminareo, dia ho fantatrao fa io no vondron-taona ijerena izao tontolo izao sy ny hoavy ao anatin'ny fitiavana hahafanta-javatra, ao anatin'ny tahotra kely, nefa mety hisy fanantenana lehibe ihany koa.
Araka ny efa nolazainay tamin'ny 26 Oktobra, dia nahatalanjona tokoa izany folo taona nodiavina izany, na ho anay na ho an'ity planeta ity. Ankoatra ny fisondrotana mankany amin'ny fikambanana velomin'ny mpirotsaka an-tsitrapo, mampipararetra sy efitrano famoaham-baovao mamokatra votoaty ao anatin'ny fiteny 30 mahery, sy mpitari-dalana eo amin'ny sahan'ny zo nomerika sy ny fampivelarana ny fampitam-baovao an-tserasera, dia nahatsangana rakitry ny zavabita goavana tsy fahita loatra avy amin'ireo lazaina fa olon-tsotra izahay—ao anatin'ny tondron'ny tantara izay ny fiovana haingana dia haingana ihany no taratra ho ao anatin'ny zavatra tsy miova manaraka eny an-dalana hatrany.
Tamin'ny alatsinainy izahay nanomboka ny lanonam-pankalazana tao anatin'ny edisiona manokan'ny GV Face nanasana ireo mpiara-manorina Rebecca sy Ethan, saingy samy nampiantrano izany lanonan'ny tsingerintaona izany avokoa ny mpikamban'ny Global Voices rehetra manerana izao tontolo izao tao anatin'izay herinandro maromaro izay, ary mbola maro ny ho avy—ary hisy ihany koa aza ny Fihaonana An-Tampony Fahaenina, izay hotontosaina any an-tanànan'i Cebu, Philippines amin'ny 24-25 Janoary (miaraha aminay!).
Iriana ho tonga soa ihany koa ny fanomezan'ny tsingerintaona, koa raha tianao ny hanohana ny asanay, dia hevero ihany raha azo atao azafady indrindra ny manao fitia tsy mba hetra, na mividy Karatra firariantsoa Krismasy (!) novolavolain'ny namanay ao amin'ny Paper Chase Press (mankaty aminay avokoa ny 100%-n'ny tombombarotra).
Arahabaina nahatratra ny tsingerintaona ry Global Voices! Ho tratran'ny arivo taona mitsingeringerina.